Endrik'io pejy io tamin'ny 15 Novambra 2018 à 17:23
335 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Aogositra 2018 à 08:24 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 15 Novambra 2018 à 17:23 (hanova) (esory)
Ny fanekem-pinoan'ny Jodaismajodaisma amin'ny [[teny hebreo]] dia ny hoe שמע ישראל / S''hemaʿYisrâ'êl'' ("Mihainoa ry Isiraely"). Izao no voasoratra ao amin'ny ''Devarim'' ([[Bokin'ny Deoteronomia]]) ao amin'ny [[Torah]]:
Hita ao amin'ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]] (Deo. 6.4) ao amin'ny [[Baiboly]] io andala-tsoratra io:
"Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany." (''Ny Baiboly'')<ref><small>Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy</small></ref>.
"Mihainoa, ry Israely: ny Tompo Andriamanitsika, dia Izy ihany no Tompo." (''Ny Baiboly Masina'')<ref><small>Baiboly katolika amin'ny teny malagasy</small></ref>.
Tononina isan'andro, maraina sy antoandro ary hariva ny ''Shema Israel''. Tononina koa izy eo an-dohafandrian'ny olona miala aina. Tononin'ireo tanora jiosy amin'ny fotoan'ny ''Bar Mitzvah'' (fahafenoan-taona ara-pivavahana: 13 taona). Voasoratra eny amin'ny vatakely firavaka (izay nogasina hoe ''filakitera''; hebreo: תפילין / ''tefilin''; grika: φυλακτήριον / ''phylacterion'')'','' amin'ny takela-koditra malefaka mipetaka eny amin'ny handrina sy ny sandry havia'','' araka ny toromariky ny Deoteronomia io fiekem-pinoana io. Voasoratra amin'ny takela-koditra apetaka eo amin'ny tolam-baravarana fidirana (dia ny atao hoe מזוזה / ''mezuzah'') koa izy.
Ny fiangonana kristiana dia nanana fanekam-pinoana izay mamaritra ny maha Kristiana ny olona iray. Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pinoana voalohany dia ny [[kerigma]], fanambaram-pinoan'ny Kristiana voalohany.:
Maro ny fanekem-pinoana kristiana fa ireto no iraisan'ny ankamaroan'ny Kristiana amin'izao fotoana izao, dia ny [[Fanekem-pinoana apostolika]] sy ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea-Konstantinopoly]] ary ny [[Fanekem-pinoana atanaziana|Fanakem-pinoan'i Atanazy]]. Ny Fanekem-pinoana nikeana sy ny Fanekam-pinoana apostolika dia samy nekena tamin'ireo [[Konsily]] momba ny [[Trinite]], ka ireto ny roa voalohany izay fohifohy kokoa:
<small>Izaho mino an’[[Monoteisma|Andriamanitra Tokana]], Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izaho mino an’i [[Jesosy]] Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; Andriamanitra avy amin’Andriamanitra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray Sobstansa (izay maha-Izy Azy) amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny [[Fanahy Masina]] tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany; sady mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Izaho manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena.</small>
<small>Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesoa Kristy Tompo tokana, Zanaka lahi­tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina; nateraka Izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray, ary Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra. Ary naka nofo tamin'i Maria Virjiny Izy, noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona; nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andron'i Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina ; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra dia mipetraka eo an-kavanan'ny Ray; mbola ho avy amim-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mankatò ny [[Batisa|batemy]] tokana ho fanalana ny fahotana. Ary izaho miandry ny hitsanganan'ny maty sy ny fiainan-ko avy. Amen.</small>
'''<bigsmall>'''أَشْهَدُ أَنْ لْاَ إِلَـهَ إِلْاَّ ٱلله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱلله'''</bigsmall>''' izay tononina hoe:
''"Ash-hadu an lâ illâha ill-Allâh, wa-ashhadu anna Muḥammadan Rassûlu-llâh"'' sy midika hoe:
Manamafy ny finoana ny maha tokana an'Andriamanitra ny fehezanteny voalohany: ny [[monoteisma]] izany izay atao aminnamin'yny teny arabo hoe: تَوْحيد / ''tawhîd'').
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/950951"